UK: Xukuumada Boris oo lagu khasbay inay shaaciso Xog ay Qarineysay ee Brexit • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UK: Xukuumada Boris oo lagu khasbay inay shaaciso Xog ay Qarineysay ee Brexit
September 12, 2019 - By: Hanad Askar
Baarlamaanka UK ayaa ku guuleystay inay ku khasbaan Xukuumada Boris Johnson inay shaaciso xogta iyo daraasada xukuumada Ingiriiska ku sameysay waxa dhici kara hadii wadanka UK isaga baxo Midowga Yurub iyadoo aan wax heshiis ah lala gelin dalalka EU-da.
Daraasadan ay xukuumada ka qarineysay shacabka ayaa waxaa kamid ah in marka wadankaasi ka baxo EU-da ay dhici karto in sicir barar ku yimaado raashinka daruuriga ah iyo waliba daawooyinka, isla markaana khal khal weyn geli doono suuqa wadankaasi oo ku xiran suuqweynaha dalalka Midowga Yurub.
Shacabka iyo Ganacsatada UK diyaar uma aha inay u babac.dhigaan caqabadaha ka iman kara Brexit ayaa lagu yiri Daraasadan loogu magacdaray “”Operation Yellowhammer”.
Raysalwasaare Boris Johnson ayaa isagu diidanaa in xogta la shaaciyo balse ku khasbanaaday inay daraasadan shaaciyaan kadib markii Baarlamaanka UK uu todobaadkan kalfadhigoodii ugu danbeeyey ay ku ansixiyeen sharci ku khasbaya Boris Johnson iyo Wasiiradiisa inay xogtan shacabka la wadaagaan.
Shacabka ayaa walaac weyn ka muujinaya xiisada ka taagan Brexit iyadoo horey ay u jirtay cabsi ah in hoos u dhac dhaqaale dalkaasi soo wajahdo hadii ay ka baxaan Midowga Yurub.